Sturridge:“Ciyaartoyda Liverpool waxay doonayaan inay horyaalka u qaadaan Steven Gerrard dartii”
HomeWararka MaantaSturridge:“Ciyaartoyda Liverpool waxay doonayaan inay horyaalka u qaadaan Steven Gerrard dartii”
Weeraryahanka Liverpool Daniel Sturridge, ayaa sheegay inay kooxdiisu damacsan tahay inay horyaalka BarclaysPremier League ugu guulaysato kabtan Steven Gerrard dartii.
Reds ayaa haatan laba dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka, taageerayaal badan ayaana bilaabay inay aaminaan in Reds oo xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey liidatay ay horyaalka ku guulaysan karto 11-ka bisha May.
Haddii kooxda Brendan Rodgers ay horyaalka ka farro maroorsan karto Manchester City iyo Chelsea, kabtan Gerrard ayaa ugu dambeyntii gacmihiisa ku qaadi doona horyaalka Premier League, oo ka mid ah koobabka ugu waaweyn ee aanu abid hanan.
Sturridge ayaa sheegay inay in isaga iyo saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ay wax walba u sameyn doonaan sidii uu 33 sanno jirkani sidoo kale ugu guuleysan lahaa Koobka Adduunka “Haddii aan ku guuleysano xaqiiqdii Steven wuu u qalmaa, wuxuu ku guuleysanaa Premier League sababtoo ah wax walba ayuu u soo sameeyey kooxdan.” ayuu u sheegay saxaafadda “Ciyaaryahan walba oo kooxdaan jooga ayaa sameyn doona intii karaankiisa ah si uu Steve u gaadho yoolkiisa”.